Zvichida uri kuzoshandisa nyowani yekushambadzira tekinoroji kuti ugadzire otomatiki mafambiro evatengi vako Iyo purojekiti inogona kusvika kumhere yekumira sezvo iwe usinganyatso kuziva kwekutanga kuronga kwako. Apa ndipo panobuda ruva, bud, munzwa unogona kuuya unobatsira.
Kutanga nekunyora pasi zviri kushanda nekuitwa. Zvichida iko kudzidziswa kwave kwakanakisa kana iko kusununguka kwekushandisa kwepuratifomu. Pamwe iwe une zviwanikwa zvihombe pane yako timu kana kuburikidza wechitatu-bato kubatsira. Chingave chero chinhu… ingo nyora pasi zviri kushanda.
Kana iwe ukapedza yakanaka maminetsi makumi matatu kusvika makumi mashanu uchipa simba kuchikwata chako kuti utumire zvinyorwa uye uchifunga nezve rose rinobvira ruva, bundu, kana munzwa, unogona kusiiwa uine muunganidzwa wemanotsi anonamira kwese kwese. Nekuburitsa pfungwa dzako dzese pane zvinyorwa zvine mavara-mavara uye nekuzvironga, iwe uchaona mamwe madingindira achibuda ausina kumboona kare.
Paunenge uchifambisa zvinyorwa zvako kuzvikamu izvi, iwe uchaona mamwe madingindira makuru anotanga kuita. Zvichida unotomboona imwe ichive yakasvibira… ichikubatsira iwe kuona kuti papi pechivhariso panzira kuti iwe ugone kutsunga maitiro ekubudirira kupfuuridza napo.
Ichi chingori chiitiko chakareruka icho chinoshandiswa mukufunga dhizaini. Dhizaini kufunga kuita kwakawanda kwazvo uko kunowanzo shandiswa kune mushandisi ruzivo dhizaini, asi kuri kuchinja mukubatsira mabhizinesi kugadzirisa nyaya hombe zvakare.
Pane zvikamu zvishanu mukufunga kwekugadzira - emphathize, tsanangura, ideate, prototype, uye bvunzo. Kufanana pakati peiyo neiyo agile kushambadzira rwendo Ndakagadzira yakanga isiri tsaona!
Ini ndinokukurudzira iwe kutora kosi, tarisa mamwe mavhidhiyo, kana kunyange tenga bhuku paKugadzira Kufunga, iri kushandura mashandiro ari kuita mabhizinesi. Kana iwe uine chero kurudziro, ndapota vasiye iwo mune zvakataurwa!